Haa, Haddii uu Raisulwasaaruhu aqbalay codsigii xildhibaanada, Maxaa Xildhibaanada ku waajib ah? | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxaa sidaas si la mid ah cod dheer ugu sheegay ra’isulwasaaraha shacabka Soomaaliyeed oo sida halkaan aad ka dheehan karto https://codkashacabka.wordpress.com/2015/01/20/mudane-raisul-wasaare-hebel-oo-ah-xildhibaan-ahna-wasiir-waa-waxaan-eednay/ qoraalo iyo farriimo ugu sheegay nooca ay tahay inay noqdaan wasiirada uu ra’isulwasaaruhu soo xuli doono, haddii uu rabo inuu dalka horumar u horseedo.
Si aan horay u dhicin, oo geesinnimo leh, oo aan looga baran siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa ra’isulwasaare Cumar Cabdirashiid, u aqbalay dhammaan qodobadii ay xildhibaanada iyo shacabka soomaaliyeed dalbadeen, wuxuuna keenay 20tan wasiir oo uu mid walbaaba midka kale ka dhicin, runtiina rajo badan laga qabo inay wax weyn ku soo kordhin karaan qaab maamul dowladeedka uu dalku la’ yahay muddada dheer. Waxaana raisulwasaaraha shacabku uga mahadnaqayaan sida sharafta badan oo uu u qiimeeyay aragtida shacabka iyo weliba sida masuuliyadda leh oo uu u soo magacaabay masuuliyiintii laga dalbaday si ay u dhamaato, isqabqabsiga iyo awood boobsiga ay xildhibaanadu wadeen. Haddaba maxaa looga fadhiyaa oo laga rabaa inay sameeyaan xildhibaanada baarlamaanka?
Wey cadahay waxa laga sugaayo xildhibaanada qaranka, waana inay aqbalaan golahaan wasiirada ee loo soo dhisay sidii ay iyagu dalbadeen, oo waa inay kala saaraan danta gaarka ah iyo tan guud, waana haddii ay mustaqbal danbe ka lee yihiin siyaasadda dalka Soomaaliya. Waxaa la idinku xantaa inaad tihiin dad qiimo jaban oo lacag yar looga iibsado fikirkooda oo aadan la heyn ujeedo siyaasadeed oo aad difaaceysaan. Maanta waxa ay mareysaa yaa sidaan si dhaanta ummadda u keena. Haddii wax kasta oo aad rabteen la idiin sameeyay, Xasan sheikh ayaan necbahay iyo anigu wasiir ma helin ma idiin noqon doonto marmarsiiyo aad ku diidaan golahaan wasiirada cusub. Haddii aad diidaanna waxaa dad badan oo maanta laga yaabo inay aad ugu dhega nugul yihiin waxa aad sheegi jirteen inay siyaasad tahay, ay arki doonaan waxa qaarbadan oo naga mid ah ay horay u ogaayeen.
Isbaaro baarlamaan dood lagu difaaci karo maanta ma taallo, ee waxaa haboon in inta aan wejiga dhabta ah ee aad lee dihiin la ogaanin aad si asluubeysan oo dalka iyo dadka anfacaaya aad ku aqbashaan golahaan cusub ee dowladda Cumar Cabdirashiid. Waxaannu u baahannahay maanta in la badbaadiyo mustaqbalka iyo aayaha laba jirka iyo kan aan weli dhalan ee Soomaaliga ah meel kasta uu caalamka ugu nool yahay, si loogu dhiso meel uu ku magacaabo GURI oo uu isagu lee yahay.
Dowladdan afartii sano ee loogu talo galay, waxaa ka haray oo kaliya in aan ka badneyn sanad iyo bar, howlaha u yaallo oo ay ummadda Soomaaliyeed ka sugeysana aad iyo aad ayey u badan yihiin, waxaana shaki badan laga muujinayaa waxa ay ku qaban karto waqtigaas yar. Si hadaba wax loo ceymiyo oo aan waqti kale nooga dhumin, waa in la dedejiyaa ansixinta dowladdaan, waana in xildhibaanadu muujiyaan inay diyaar u yihiin inay qeyb ka qaataan dib u dhiska rajada Soomaaliyeed oo sanado badan horay looga dhumiyay.
Waxaana la aqbali doonin aragtiyada u eg midkii dagaal oogayaasha, oo dheheysa mar kasta oo la is heysto aniga (xildhibaan) dan ayaa iigu jirta. Waxaa la rabaa in la helo xildhibaanno, iyaga oo kala aragti duwan isku kaashan kara danta guud oo ay ugu horeyso ansixinta dowladdaan cusub si looga baxo isqabqabsiga dib u dhigay aayaha ummadda Soomaaliyeed. Ogow xildhibaan maanta taariikh ayaa qormeysa noqo mid taariikhda baal dahab ah ka gala, oo maanta codkaada ku badbaadi aayaha iyo mustaqbalka ilmahaada iyo ilmahooda.
« Mudane ra’isul wasaare, hebel oo ah xildhibaan ahna wasiir waa waxaan eednay.
Xalka kaliya ee haray, waa in Baarlamaanka la kala diro sida uu qabo qodobka 67aad ee dastuurka KMG ah. »